ULwesine, April 14, 2016 ULwesibili, April 12, 2016 UMuhammad Yasin
Akungabazeki ukuthi ukumaketha kwedijithali kuyisilo esinamandla - nesilo esisodwa se-helluva lapho. Njengoba sonke singathanda ukucabanga ukuthi ukumaketha kwedijithali ngokufanayo kuyafana noma ngabe yini, akunjalo neze - futhi izizathu zisobala. Njengebhizinisi, ungakhetha ukunikela amaphesenti athile wesikhathi sakho nesabelomali ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokumaketha kwedijithali: imithombo yezokuxhumana, i-PPC, ukubuyisela emuva emuva, ukumaketha kwevidiyo, ukumaketha nge-imeyili, i-SEO, ukwenziwa kwamathuluzi wewebhusayithi njalonjalo.
Noma kunjalo, okuthakazelisa nakakhulu ukubona ukuthi izimboni ezahlukahlukene zibeka kanjani phambili amasu azo wokumaketha edijithali. Ngoba izimboni ezahlukahlukene ngokusobala zizoba nezinhloso zebhizinisi ezihluke kakhulu, kuzothuthukiswa kuphela amathuluzi nezinkundla ezithile ezingathola leyo miphumela. Futhi kuyathakazelisa ikakhulukazi ukubona ukuthi izimboni ezahlukahlukene ziziveza kanjani ku-inthanethi nokuthi zitholakala kanjani kumakhasimende nakulindelwe.
Phakathi nomsebenzi wami, ngihlangane nabantu abaningi bokumaketha ezimbonini eziningi ezahlukahlukene. Ngesikhathi ngihlangana, ngifunde inani elikhulu ngamasu wokumaketha abawasebenzisayo ukufeza izinhloso zabo. Njengoba bekulindelekile, amasu amaningi asetshenzisiwe abhekiswe kulezo zimboni ezithile - futhi yebo, ziphumelele. Uma ungumakethi kunoma yiziphi izimboni ezi-5 ezingezansi, uzofuna ukuqhubeka ufunda. Nawa amathiphu amathathu wokuthengisa wedijithali asebenzayo ezimbonini ezi-3 ezihlukile:
Izandla phansi, enye yezimboni ezikhohlisayo kakhulu ukuzimaketha imboni yezokwelapha. Isizathu esiyinhloko salokhu ukuthi awukwazi ukwenza izimangalo ezinesibindi ezinjengokuthi “le ndlela yokwelashwa izokulapha ukugula kwakho.” Ezimweni eziningi, ungasho kuphela ubufakazi bokuthi lokhu kusizile inani elikhulu labantu (Isb: “lokhu kwelashwa kusebenza ngo-98%”), noma ukuthi kungasiza. Ngokusobala, lokhu kuyinkinga esemthethweni engu-100%.
Noma kunjalo, noma ngabe kunemikhawulo eza nokukhiqiza imiyalezo evunyelwe ngokomthetho, izibhedlela, imitholampilo nezinye izikhungo zezokwelapha zisenethuba elihle (kanye nokuguquguquka ngokwanele) 'kokuklina izinto zabo.' Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokwenza lokhu embonini yezokwelapha ukwenza ukuhleleka kwakho kube ngokwakho futhi kukhombise ukuthi uyakhathala. Ukunakekelwa kwezempilo kuyindaba ebucayi kakhulu; ngakho-ke kungani ungahambi imayela elengeziwe ukukhombisa ukuthi amaklayenti akho (noma iziguli, kunalokho) akuthanda kakhulu.
Yize inhlangano yakho kufanele ikhombise lawa mavement womuntu kuyo yonke iwebhusayithi yabo kanye nokunye okuthengiswayo, imithombo yezokuxhumana iyindlela elula kakhulu yokuthola leyo milayezo yokunakekela iziguli ezintsha nezamanje. Kanye nezimemezelo zokuphatha ezijwayelekile (I-Ex: Leli hhovisi lizovalwa ukuze kwakhiwe. Noma uDkt Williams akekho ehhovisi), umxhumanisi wakho wezokuxhumana angahamba ibanga elingaphezulu futhi abelane ngama-athikili ngokuhlala uphilile ebusika, noma ngokunikeza amathiphu ajwayelekile wokuhlala uphilile emcimbini wasendaweni (Ex: Ukwenza izinqumo ezinempilo e-State Fair). Ngisho nokwabelana ngezithombe ezinohlonze kungenza iziguli zizizwe zikhululekile ngomkhiqizo wakho - njengesithombe samaPhoyisa eshiya ama-donuts kubasebenzi abahlengikazi ngempelasonto yeholide ye-BIG. Yizinto ezincane ezizohlukanisa inhlangano yakho kokunye. Induduzo isiguli # 1 esizwa ukuthi iziguli zifuna ukuzizwa lapho zifuna udokotela wokunakekelwa okuyisisekelo noma zinquma ukuthi zizokwenzelaphi ukuze zihlinzwe.
Njengomkhakha wezokwelapha, imboni yezimoto incintisana ngokweqile… mhlawumbe nokuncintisana okukhulu. Ngokuqinisekile abantu banezintandokazi zokuthi yiziphi izibhedlela nemitholampilo abafuna ukuya kuyo, kepha uma i-push iza ukushova, uma unezimo eziphuthumayo, uzoya esibhedlela esiseduze kuqala. Izibhedlela zihlala zivulekile - kepha ezinye zizovele zenze kangcono, futhi zibe nedumela elingcono kunezinye.
Kulolu suku nakulesi sikhathi, noma kunjalo, imboni yezimoto inhle kakhulu njengokutholakala kwayo online. Ngenxa yokuthi izimoto ziyi-investimenti enkulu kangaka, abathengi benza ucwaningo oluningi online ngokusemandleni abantu - okubandakanya ukuhlola iwebhusayithi yakho yabathengisi kusuka phezulu kuye phansi. Lokho kusho ukuthi, uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi abathengi bakho bahlala behlanganyela newebhusayithi yakho kulo lonke uhambo lwabo lokuthenga izimoto, udinga ngokuphelele ukunaka kakhulu ukuthengiswa kwakho kwezimoto online; futhi ugcine yonke impahla yakho namaphromoshini usesikhathini. Abantu abanaso isikhathi sokubiza abathengisi bakho babuze ukuthi ngabe kukhona okusatholakala yini noma ukukhushulwa kusaqhubeka. Uma kukhona okutholakalayo kuwebhusayithi yakho, abathengi balindele ukuthi kube esizeni. Ngokwengeziwe, abathengi bafuna ukwazi ukusebenzisa konke okutholakala njengamanje egumbini lakho lokubukisa langempela. Lapho abathengi bebona imoto abanentshisekelo kuyo ku-intanethi, amathuba amahle azongena ekukhetheni kwezimoto zabo ezi-3 eziphezulu; ngakho-ke qiniseka ukuthi isiza sakho asishiyi ngemuva.
Imboni yokugcina, futhi engaba yinselele kakhulu engizoxoxa ngayo ngeMboni Yokudlela! Isizathu sokuthi ngithi "inselele enkulu" kungenxa ye- kudingeka inani elikhulu lokugcinwa ukuphatha zonke izibuyekezo eziku-inthanethi, ukuphawula nezikhalazo ezivela kubathengi kuyo yonke imikhakha yemizwa. Futhi njengoba wazi, inkinga esheshayo futhi esebenza kahle ixazululwa, kungcono ukuthi kube nedumela labo kokubili ku-inthanethi naku-inthanethi. Ngenxa yokuthi kube lula kangakanani ukuthumela impendulo online, izindawo zokudlela kufanele benze yonke imizamo yokuphendula kuwo wonke amazwana noma nini lapho kungenzeka khona abantu - okuhle noma okungalungile! Futhi, okuncane kuhamba ibanga elide ukuguqula umuntu abe yikhasimende impilo yonke.
Amapulatifomu ezokuxhumana nabantu njenge-Facebook avumela abasebenzisi ukukala esidlangalaleni izinhlangano, kanye nokushiya ukubuyekezwa. Uma ungumphathi wekhasi, uzothola izaziso ngokushesha lapho othile eshiya isibuyekezo ekhasini lakho. Ukushiya umbono omuhle kubo, into ekahle nenenhlonipho kakhulu ongayenza ukuphendula kubo kungakapheli amahora angama-24 - ikakhulukazi uma kungukubuyekezwa okungekuhle. Lapho abathengi basemshinini wesikhashana, bafuna izinto zixazululwe ASAP.
Uma uphendula isibuyekezo esingesihle, bona ukuthi ungazenza kanjani izinto zibe ngcono. Uma kungukubuyekezwa okuhle, zinike isikhathi sokubabonga ngesikhathi esifanayo. Abasebenzisi ababona kuphela ukubuyekeza komthengi wakho, kodwa futhi babona ukuthi uziphatha kanjani. Akunandaba ukuthi ukubuyekezwa akulungile noma cha, indlela oziveza ngayo kumakhasimende isho umehluko phakathi kwegumbi eligcwele labantu abalinde itafula; futhi ikhasimende njalo emahoreni amabili. Ubungcweti yikho konke! Ama-Restauranteurs nawo amukelekile ukuphendula kubathengi kwezinye izingosi zokubuyekeza njenge-Yelp ne-Urbanspoon.
Yize kuliqiniso ukuthi izici ezahlukahlukene zokumaketha kwedijithali zingasetshenziswa cishe yinhlangano, izinhlobo zamapulatifomu wokumaketha edijithali namasu asetshenzisiwe ahluka kakhulu ngokususelwa embonini. Okuthathwa njengokusemqoka embonini eyodwa kungahle kungabi nokubaluleka okukhulu kwenye. Izimboni ezahlukahlukene zinemigomo ehlukile, ngakho-ke, izindlela ezahlukahlukene zokumaketha kubathengi online.
Tags: ukumaketha kwezimotoukudayiswa kwe-digitalumkhakha wokumaketha kwedijithaliumkhakha wokumakethaukumaketha kwezokwelaphaukumaketha kwezitolo zokudlelaSesha Marketingsocial mediaSocial Media Marketing
Jul 15, 2016 ku-4: 05 AM
Lokhu kufakazela ukuthi ukumaketha kwedijithali akuyona nje isihloko esincanyana kepha isihloko esibanzi futhi esiguquguqukayo. Ubuchwepheshe bokumaketha kwedijithali buchaza ubunyoninco bomhlaba wokumaketha. Umkhakha wezokwelapha, owezimoto nowezindawo zokudlela ezimbalwa ezimbonini eziningi ezihola phambili emhlabeni. Ngalokho, ngiyavuma ukuthi ukumaketha kwedijithali kuthathe izinga elisha lonke.